Census | Danya Wadi
By danyawadi May 4, 2016 Leaveacomment
Rakhine State population: Muslim and Buddisht Myanmar’s official narrative and popular discourse of Muslim Population growth in Rakhine or Arakan isaLIE! Over the last 50 years, the Muslim and Buddhist population ratio in Rakhine remains stable.
CENSUS; မြန်မာပြည်မှ အရေးကြီးကိန်းဂဏန်းများ
By danyawadi June 3, 2015 Leaveacomment
မိုးမင်း Wed, 2015-06-03 အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၁၃) မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေအသိပ်သည်းဆုံးမြို့မှာ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – နစ်ကီ) နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်ကြာ မကောက်ယူဖြစ်ခဲ့သည့် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းပင်မအစီရင်ခံစာကို မေလ ၂၉ ရက်တွင် အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ မတ်လတွင် ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့ပြေးအစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၄ သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အများမျှော်မှန်းထားသည့် လူဦးရေအရေအတွက်ထက် လျော့နည်းနေသည့်အတွက် ထိုစဉ်က စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက အံ့သြခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ သန်း ၆၀ အနည်းဆုံးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြရာမှ ရှေ့ပြေးလူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ တွင် ၅၁ သန်းကျော်သာ ရှိနေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင်မှုမရှိသေးခြင်းကြောင့် ပင်မအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချိန်တွင် […]
၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တစ် ခု လုံး ၌ နိုင် ငံ သား စိ စစ် ရေး လုပ် မည်
By danyawadi December 6, 2014 Leaveacomment
Posted on December 6, 2014 by kokolinn ဒီဇင်ဘာ (၄)၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ ဗမာ့တိုင်း(မ)စ်။ ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတွင် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ အရ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်ငန်းကို စတင်လိမ့်မည်ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန် ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စိစစ်ရာ၌ အချိန် (၅) လခန့် ကြာလိမ့်မည်ဟု ဦးခင်ရီက ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ထိုစီမံကိန်းကို လွယ်ကူချောမော့စွာ အကောင်အတည်ဖော်နိုင် ရန် လိုအပ်သည့် လုံခြုံရေးများကို ပြင်ဆင်ထားသကဲ့ သို့ လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်လျက်ရှိကြောင်း သူက ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ စိစစ်ရေးကို […]
ဦးအောင်ခင် နှင့် ကို ကျော်ကျော်သိန်း(ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်း) ဧပြီ ၁၀ ။၂၀၁၄ ကုလသမဂ္ဂအကူအညီနဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း ပြုစုရာမှာ စာရင်းမကောက်နိုင်လို့ ကျန်နေ တဲ့ေ န ရာနဲ့ တမင်ချန်ထားတဲ့ နေရာတွေရှိတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားအချို့ နဲ့ မွတ်စလင်ဦးရေ ကို ရေ တွက်ဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရှိပြီးသာမြို့ နယ် လူဦးရေစာရင်းကို အားကိုးနိုင်ပါ တယ်။ ဥပမာ မောင်တောမြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မနှစ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အချက် အလက်များ စာအုပ်လိုမှတ်တမ်းမှာ လူဦးရေစာရင်းကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်း မေ ကာက်နိုင်သေးလို့ ကျန်နေတဲ့နေရာမှာလည်း ဒေသအခြေအနေကိုလိုက်ပြီး နောင်အခါမှာ လူ ဦးရေစာရင်း ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံတခုတည်းကိုသာသုံးပြီး (၁၀) နှစ်တကြိမ် […]
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက်လူဦးရေပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံနှင့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒ ခံယူပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်
By danyawadi September 2, 2014 Leaveacomment
By danyawadi September 1, 2014 Leaveacomment
By Fakhruddin Ahmed The Daily Star August 25, 2014 ROHINGYA crisis has been weighing on the world’s conscience for decades. The UN Human Rights Council lists Myanmar’s 800, 000 Rohingya Muslims among the world’s most persecuted minorities. Residents of Myanmar for over 600 years, Rohingyas have been stripped of their Myanmar citizenship. Oppression and […]
သန်းခေါင်စာရင်းရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းအကြောင်း ရှင်းလင်း ပွဲမှ ပြော စကား အချို့
သြဂုတ် ၃၀ ၊ ၂၀၁၄ M-Media ချမ်းငြိမ်းအေး သန်းခေါင်စာရင်း ကိစ္စမှာ လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးကို တရားသေစွဲ ကိုင်ထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ရခိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာတောင်းခံသည့် ခရိုင် ၃ ခု နဲ့ ကချင် ၂၅ အုပ်စုကို စာရင်းမကောက်ခံနိုင်ခဲ့၊ ရခိုင်ပြဿ နာက နိုင်ငံရေးဖြစ်လို့ နည်းပညာဖြင့် ဖြေရှင်းလို့မရ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း၊အရင် သန်း ၆၀ ကျော်ဆိုတာ ခန့်မှန်းချက်သာဖြစ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒီနေ့ပြော သွား တဲ့ ၅၁.၄ သန်းကိုသာ လက်ရှိအတည်ယူပေးပါရန်၊၅၁.၄ သန်းက အတည်မဟုတ်သေးကြောင်း၊၅၁.၄ သန်းမှာ နိုင်ငံခြားကို တရားဝင်ရော အောက်လမ်းကရော သွားသူတွေ မပါသေးကြောင်း၊၂၀၁၅ မေလခန့်မှာ ထွက်လာမယ့် ပင်မစာရင်းကသာလျှင် အတည်ပြုချက်ဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းကို လိမ်လည်ဖြေဆိုရင် […]
မြန်မာပြည် လူဦးရေ ၉ သန်း ဘယ်ရောက်နေသလဲ
Saturday, August 30, 2014 သန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်က မြန်မာပြည်လူဦးရေ စာရင်းကို သောကြာနေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တနေရာ (ဓာတ်ပုံ – တေဇလှိုင်/ ဧရာဝတီ) မြန်မာပြည်မှာ လူဦးရေ ၅၁ သန်း ရှိပါတယ် တဲ့။ အဲဒီ ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်း ထုတ်ပြန်ရခြင်းက အစိုးရရဲ့ စီမံကိန်း၊ မူဝါဒချမှတ်မှု နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုပါတယ်။ ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း ဆိုတာဟာလည်း နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လုပ်ကိုင်ရခြင်းပါပဲ တဲ့။ လူဦးရေ အတိအကျကတော့ ၅၁,၄၁၉,၄၂၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့လူဦးရေစာရင်း လို့ ဆိုတယ်။ ပြည်ပရောက် သံရုံးဝန်ထမ်းတွေ အဲဒီထဲ […]
By danyawadi August 26, 2014 Leaveacomment
၁၉၇၃ သန်းခေါင်စာရင်းမှာပါတဲ့ ဒိုင်းနက်ဟာ နိုင်ငံခြားသားအုပ်စုမှာပါတယ်။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေအရ ဒိုင်းနက်က ဘာဖြစ်လို့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်သွားတာလဲ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု လက်ထက် လွတ်တော်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ လွှတ်တော်အမတ်ရှိတယ်။ ဒိုင်းနက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာက အစ္စလာမ်ဖြစ်တယ်။ ဦးနုလက်ထက် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဦးဖေခင်ကို ရိုဟင်ဂျာအမတ် (မေယုခရိုင်က)က ရခိုင်ကို ပင်လုံစာချုပ်မှာ ဘာဖြစ်လို့ လက်မှတ်မထိုးခိုင်းခဲ့တာလဲလို့